Salaamanews » Tallaalka Dabeysha oo ka bilowday Muqdisho
Home » Caafimaadka, Warar Tallaalka Dabeysha oo ka bilowday Muqdisho Print - Daabace: SalaamaNews - Nov 17th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
MSF oo ka digtay cudurro halis ah oo ka dillaacayo MuqdishoDeeq la gaarsiiyay Cisbitaalka BurcoMadaxweyne Maxamuud oo daaha ka rogay tallaalka carruurta SoomaalidaCudur aan la aqoon dawadiisana la waayay ayaa dad ku laayay Jubada hooseHey’ad indha fiiqis 500 oo qof uga sameysay gobolka Hiiraan (Salaamanews)-Ololaha tallaalka dabeysha ayaa ka bilowday degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo tallaal caafimaad loo sameynayo ubadka Soomaaliyeed ee da’doodu yartahay.
Tallaalkani ka bilowday degmooyinka gobolka Banaadir, ayaa waxaa xariga ka jartay wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed oo sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda aas aasiga ah ee ubadka Soomaaliyeed.
Tallaalka ubadku waa muhiim
Xafladda looga jaray xariga tallaalkani ayaa waxaa ka soo qeyb galay masuuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka, dhaqaatii, masuuliyiinta hey’adda mashruucan fulineysa WHO, iyo gudoomiyeyaasha 17-ka degmo ee gobolka Banaadir.
Agaasimaha wasaaradda Caafimaadka Ducaale Aadan oo furitaanka Talaalka khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in Ololaha Talaalka uu maanta ka biloowday dagmiiyinka Gobolka Banaadir uuna socon doono ilaa 19-ka Bishaan.
Ducaale Aadan ayaa ugu baaqay Haweenka Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaataan Ololaha Talaalka ee looga hortagayo cudurka Dabeeysha maadama cudurkaasi uu naafeeyo dhalaanka.
Maxamed C/llaahi oo ka socday Hay’adda WHO ayaa tilmaamay in caalamka laga dabar gooyay cudurka Booliyada isagoona xusay in bulshada Soomaaliyeed aysan fahamsaneen faa’ida uu leeyahay Talaalka caruurta.
Tallaalkani waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka, waxaana hirgalineysa hey’adda caafimaadka aduunka ee WHO, waxaana laga fulin doonaa dhamaan degmooyinka gobolkani Banaadir.
Tags: caafimaadka, warar « Qoraalkii HoreMuslimiinta Falastiin oo doqeyn arxan darro ah ay ku socoto (Sawirro)	Qoraalka Xiga »Wasiirradii hore iyo kuwa cusub oo kulmay	Halkan Hoose ku Jawaab